Web Design | Shwe Web Hosting | Myanmar
NetScriper မှ လှပသေသပ်၍ နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ Website Design များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။
Web page ၁၀ မျက်နှာ Static website များမှ စ၍ သင်ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်သော CMS များ၊ International or Myanmar Bank API များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ Online တွင်ရောင်းချနိုင်သော E-commerce website များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
It's time for Responsive
Fully Responsive ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Internet ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့် device နှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
မည်သည့် Web Browser နှင့်မဆို compatible ဖြစ်ခြင်း
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြစ်သည့် HTML5, CSS3 & jQuery ကို အသုံးပြုထားခြင်း
ဝါရင့် မြန်မာနည်းပညာရှင်များမှ 100% hand-coding ပြုလုပ်ပေးခြင်း
Mobile device များမှ သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Mobile SEO)
Number of Web Pages up to 10 up to 25 up to 80
Unlimited self-building pages up to 100 items
Unlimited self-building pages/items -
Website အမျိုးအစား Responsive Website
Mobile, Tablet, Desktop Laptop များအားလုံးတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်
Web Design အမျိုးအစား Tailor-made Design from Sketch
Design Team မှ သင်၏လုပ်ငန်းအား အကြမ်းဖျင်းလေ့လာ၍ သင့်အတွက်သီသန့် Design ဆွဲမည်။
စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်အထိ Designer က Review/ Revision ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည်
Email Accounts ကိုယ်ပိုင်/Business E-mail account များ (eg: [email protected]) ရရှိမည်
Email Account အရေအတွက် Package ပေါ်မူတည်၍ Email account အရေအတွက်5~ 10 ရရှိမည်
Domain Name ကိုယ်ပိုင် Domain (.com / .net / .org / .info ဖြင့်) ရရှိမည်
Web Hosting ကိုယ်ပိုင် Hosting account ရရှိမည်
Domain Control Panel Domain Control Panel (DCP) ပါရှိမည်၊ Domain အား Full Ownership ရရှိမည်
Hosting Control Panel cPanel (Unlimited Sub-domains, FTP, MySQL, Site Statistics)
Hosting Support UK နှင့် Myanmar ရှိ NetScriper ၏ Hosting Team မှ အခမဲ့ Technical Support ပေးပါသည်
Technical Support Basic Standard Premium
Website Update ပြုလုပ်ခြင်း 1 လ 1 ကြိမ် အခမဲ့ Update ပြုလုပ်ပေးမည် CMS ဖြစ်သောကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင် အချိန်မရွေး Website Update လုပ်နိုင်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ပါက NetScriper မှ 1 လ 1 ကြိမ် Update ပြုလုပ်ပေးမည်။ WP Core/System နှင့် Plugin များ version အသစ်ထွက်သည်နှင့် NetScriper မှ လစဉ်အခမဲ့ Update/Install/Configure ပြုလုပ်ပေးမည်
Update ပြုလုပ်နိုင်ရန် Training - Website အား သင်ကိုယ်တိုင် Update ပြုလုပ်နိုင်ရန် အခမဲ့ Training ပေးမည်
Site Features Static Static CMS
(edit yourself) E-commerce
(online shop with Payment Gateway / International or Myanmar Bank API - KBZ or CB Bank) Advanced App.
(online Billing system, online HR system, Real-time Booking system, Cloud app, etc...)
Dev. Platform / Engine HTML5 / PHP HTML5 / PHP WordPress CMS
Open-source) Magento CMS
Open-source) NetScriper CMS
Hand-coding in MVC)
Additional Features Search Engine Friendly, W3C Standard, Social Network Integration
Web Content Analysis Project Coordinator မှ Content များ မထည့်သွင်းခင် Content Analysis & Grouping လုပ်ပေးမည်
(Website အတွက်လိုအပ်သော Content များ Client ဘက်မှပေးရမည်)
Quotation Quotation ရယူရန်အတွက် Web Design - Sales & Marketing Team သို့ဆက်သွယ်ပါ။ Contact Us
Shwe Hosting (NetScriper) တွင် website ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူနိုင်သည့် အချက်များမှာ
သင်၏ website သည် -
Search Engine Friendly ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ Website/စီးပွားရေးအား Internet တွင် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း
W3C Standard နှင့် ကိုက်ညီခြင်း
Mobile, Tablet နှင့် Desktop / Laptop များအားလုံးတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
ပေါ့ပါး၍ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
NetScriper မှ သင်၏ Domain, Hosting, Website, PPC Ads အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူပေးခြင်း စသည် တို့ဖြစ်ပါသည်။
Shwe Hosting (NetScriper) သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိပြီး US, UK, Europe နှင့် Asia ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၂၀) ကျော်အား Domain, Hosting နှင့် Web Design အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ Online Business Model နှင့် Website အတွက် လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်တော်တို့ ဝါရင့် မြန်မာနည်းပညာရှင်များ နှင့် အခမဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ရုံး Building 14, Room 601, MICT Park, Yangon တွင် လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် (သို့) Phone: 01-230-5191, 09-448-4444-00, 09-448-4444-11, 09-448-4444-22 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Website ထဲက စာတွေ၊ ပုံတွေ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောင်းလို့ရလား ?
Web-1 နှင့် Web-2 package ကလွဲရင် တခြား package တွေဖြစ်တဲ့ Web-3 ကနေ Web-5 အထိက ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောင်းလို့ရတဲ့စနစ် Content Management System (CMS) ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းလဲရာမှာ Rich Text Editor ပါဝင်သည့်အတွက် Microsoft word ထဲတွင် စာရိုက်သကဲ့သို့ လွယ်ကူစွာ Bold, Italic, Underline ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ Text Alignment ပြောင်းလဲခြင်းများကို Click နှိပ်၍ လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Shwe Hosting (NetScriper) ကပြုလုပ်တဲ့ Site တွေကို Mobile Phone ဖြင့် သုံးလို့ရမလား ?
ရပါတယ်။ Responsive Website Design ဖြစ်တဲ့အတွက် Mobile, Tablet Device များမှ ကြည့်ရှုပါက (သာမာန် Website မျာကဲ့သို့ ချူံ.ချဲ. လုပ်စရာမလိုဘဲ) Mobile Application များအသုံးပြုသကဲ့သို့ လက်ဖြင့် Touch လုပ်ခြင်း၊ Scroll လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် အလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
ထိုသို့ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Phone ထဲသို့ Application ထည့်သွင်းစရာမလိုပါဘူး။ Smart Phone တိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Web Browser မှ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်ရဲ့ Website ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Mobile Phone အသုံးပြုသူ၊ Tablet များမှ Internet ကြည့်ရှုသူ၊ Desktop/ Laptop များမှ Internet အသုံးပြုသူများ အားလုံး လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဤသို့ လိုက်လျောညီထွေစွာ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲရာတွင် Font Size / Text များသည် Mobile တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သော အရွယ်အစားသို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ Photo / Image များသည် မည်သည့် Mobile Phone Size နှင့် မဆို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Size များဖြစ်သွားခြင်း၊ Form များကို Phone ၏ Keypad မှ လွယ်ကူစွာ ဖြည့်နိုင်ခြင်း၊ Button/ Menu များသည် လက်ဖြင့် Touch ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသည့် အနေအထားသို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် Responsive နည်းပညာဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တခြား Company ကဝယ်ထားတဲ့ Domain နှင့် Hosting ရှိပြီးသားကို Shwe Hosting (NetScriper) မှာ Website လုပ်လို့ရမလား ?
ရပါတယ်။ အဲဒီ ရှိပြီးသား Domain ကို NetScriper မှ အခမဲ့ပေးမည့် Hosting Sever သို့ Point လုပ်ကာ သင့်ရဲ့ Website အသစ်တက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ (သို့) NetScriper မှ Website အား သင့် ရှိပြီးသား Hosting သို့ တင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
တခြား Company ကလုပ်ထားတဲ့ ရှိပြီးသား Website ကို Shwe Hosting (NetScriper) မှ Update လုပ်ပေးမလား ? ပြင်ဆင်မွမ်းမံပေးမလား ?
လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
ရှိပြီးသား Site ကလုပ်တာ မကြာသေးဘူး။ (Technology က up-to-date ဖြစ်တယ်)၊ Design တွေလည်းကောင်းတယ်၊ ကြိုက်လည်း ကြိုက်တယ် ဆိုရင် NetScriper မှ နာရီပိုင်းသာယူပြီး ပြုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ ရှိပြီးသား Site က Technology လည်း ဟောင်းနေပြီ။ Design တွေလည်း out နေပြီ၊ တော်တော်များပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ NetScriper မှာ Site အသစ်လုပ်တာ ပိုသင့်တော်မှာပါ။ ရှိပြီးသား Website လိပ်စာ (Domain Name) ကို Flyer တွေ Name Card တွေမှာ ရိုက်ပြီးသား ဖြစ်နေတာမို့ NetScriper မှ အဲဒီ Domain ကို အရင် company ဆီကရအောင် လွှဲပြောင်းယူပေးမှာပါ။ Local (မြန်မာပြည်တွင်း) company ဖြစ်ဖြစ်၊ International (ပြည်ပ) company ဖြစ်ဖြစ် NetScriper မှ ပိုင်ရှင် သဘောတူညီချက်ဖြင့် အပြည့်အဝရယူပေးနိုင်ပါတယ်။
Website ပြုလုပ်နေစဉ် ကာလအတွင်း Shwe Hosting (NetScriper) ရုံးခန်း သို့လာဖို့လိုလား?
Design Team နှင့် Development Team များအား တွေ့ဆုံရန် NetScriper ရုံးခန်း သို့အချိန်မရွေး လာရောက်နိုင်ပါတယ်။ တချို.ကိစ္စများကို သင်ရှိနေစဉ်မှာ တထိုင်တည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Data များပေးပို့ခြင်း၊ Design ပြင်ခြင်း၊ Beta Site ပြခြင်းများကိုတော့ Email, Phone များမှ တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ Design Team (သို့) Development Team မှ သင့်ရုံးခန်းသို့ အကြိမ်မည်မျှ လာရောက်နိုင်သည်ကို ပူးတွဲပါ Standard Web Design Package စာမျက်နှာတွင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Online Conference / Online Meeting ကို (Zoom, AnyMeeting, Google Meet, Join.Me စသည်ဖြင့်) အချိန်မရွေး စီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်။ Marketing Team မှ Pre-Sale လာရောက်ရှင်းပြခြင်း၊ Support Team မှ ငွေလာရောက်ကောက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
Website လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Data တွေ ( စာတွေ/ ပုံတွေ ) ကိုလာအပ်တဲ့နေ့မှာ တစ်ခါတည်းပေးရမှာလား ?
လာအပ်တဲ့နေ့မှာ 50% သွင်းပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ Domain Name ကို availability checking လုပ်ပြီး ချက်ချင်း Register လုပ်ပေးပါမယ်။ Hosting နဲ့ တစ်ခါတည်း ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် email များလည်း စတင်အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါလာတဲ့ Data တွေနဲ့ Design Team က Layout စဆွဲဖို့ Design နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးမှာပါ။ Working Day (၄) ရက်၊ (၅) ရက် ခန့်မှာ Layout Design ကြည့်ရမယ့် Link ကို email နဲ့ ပို့ပေးပါမယ်။ Design ကို ကြည့်ရှုပြီး Colour Theme, Content Position, Product/Item/Service Highlight စသည်တို့အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်အထိ Designer က Review / Revision ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Final Design ရပြီဆိုပါက Developer များက Coding စရေးမှာပါ။
Frame ချသည့်အဆင့် ပြီးစီးပါက Content များ၊ Page များ စတင်ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာတော့ Data တွေရသလောက် အားလုံးပေးသွားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးသလောက် Beta Version / Preview Site မှာ Client မှ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်များကိုလည်း မှာကြားနိုင်ပါတယ်။ ( Data များလိုအပ်သေးရင် ဒီ Step မှာပဲ စောင့်ဆိုင်းပေးမှာပါ )
Page များအားလုံး / Website တစ်ခုလုံး ပြီးစီးပြီ ဆိုပါက Project Sign-Off ပြုလုပ်ပါမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျန်ငွေ 50% ကို Client မှ ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး NetScriper မှ Website Live ပြုလုပ်ပေးပါမယ်။
လစဉ်အခမဲ့ Maintenance ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Data အသစ်များ၊ Content အသစ်များ၊ Website Update ပြုလုပ်ခြင်းများကို လိုအပ်သလို 1 လ 1 ကြိမ် အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။